Kitapo Photoshop: aiza no hampidinana azy ireo ary hahatonga azy ireo hanana kalitao | Famoronana an-tserasera
Mpamorona iray fantatsika fa ny fampiasana ny fandokoana photoshop zavatra ilaina izany. Ireo dia manolotra zava-misy sy voajanahary amin'ireo sary izay mahasarika ny sain'ny olona mijery azy, ary izany indrindra no tadiavin'ny mpanoratra.
Ny famoronana fahatsapana ny zava-misy, toy ny hoe azo kitihina ny sary, toy ny hoe voamariky ny fahamendrehana na ny fahamendrehan'ny sary no tanjon'ny mpamorona iray, ary mba hahatratrarana izany dia tena zava-dehibe ny lamba. Saingy, raha tsy tianao ny mamorona azy ireo amin'ny volanao, na mila manana karazany maro ianao ho an'ny tetik'asa sary, eto dia hiresaka momba ny tranonkala azonao atao izahay misintona textures Photoshop.
1.2 Ahoana ny fomba hanampiana lamba amin'ny Photoshop
2 Aiza no ahazoana miloko Photoshop
2.3 Teknolojia tahiry maimaimpoana
2.5 Drafitra / firafitra CGT
2.6 Teknolojia Malalaka an'i Mayang
2.7 Texture Textures: Arroway Texture
Raha miresaka amin'ny jargon an'ny sary nomerika isika dia azo faritana ho toy ny sosona izay ampidirina amina sary amin'ny alàlan'ny programa fanovana ary misy ambonin'ny izay manaha-tahaka ny firafitra. Izany hoe taratasy, hazo, tasy sns. na inona na inona manome an'io sary io zava-misy.
Raha te-hahazo ireo firafitra dia azonao atao sary ny zavatra tadiavinao, skaneo izy io na mamorona ireo firafitrao ao amin'ny Photoshop.
Ny antony fampiasana textures dia ny fanomezana ambaratonga lalina sy fahatsapana an'io sary io. Raha atao teny hafa, dia ny fifandraisana amin'ireo mpampiasa izay mijery ny sary, amin'ny fomba izay mahataitra ny fahatsapana. Noho izany, ny sary miaraka amin'ity teknika ity dia mitaky asa be dia be mba hahatonga azy ho tsara, toy ny hoe nomena sosona realisme izay tokony hapetraka tsara tokoa izy io mba tsy ho tsikaritra.
Tokony ho fantatrao fa tsy misy karazana firafitra tokana. Betsaka ny azo isafidianana. Hiankina amin'ny vokatra tianao ho tratrarina izany. Azonao atao, ohatra, ny mahita:
Firafitra voajanahary. Ireo no mitady valiny mifandraika amin'ny fahatsapana: fofona, fahitana, tsiro, fikasihana ... Ohatra ny hodi-kazo, ny onjan-dranomasina, ny rivotra ...
Firafitra 3D. Izy ireo dia miavaka amin'ny alàlan'ny fanomezana ny halaliny sy ny habeny amin'ny sary amin'ny fomba iray izay toa miavaka amin'ny 2D.
Ny nofinofy. Fantasy textures miezaka manome majia sary, miaraka amin'ny antsipirihany mystical, tsy tena izy fa izany dia mamadika ny sary ho lasa nofinofy ao aminy.
Stains. Ny firafitry ny teboka dia manandrana manatratra ny zava-misy isan'andro. Ohatra amin'izany ny rano mitete ao anaty kaopy misy kafe, latsaka eo amin'ny lamba fandroana na ridao, na koa ra na ranomainty avy amin'ny penina.
Lamba firakotra. Adinoy ny fihenam-bidy, ny lamba dia mitady haka tahaka ny fitaovana anaovany azy, avy amin'ny malemy toa ny landy, volory, volon'ondry ka hatramin'ny "marokoroko" indrindra.
Ahoana ny fomba hanampiana lamba amin'ny Photoshop
Alao an-tsaina hoe nahita ny endrika tadiavinao ianao ary te hampiasa azy io amin'ny tetikasanao manokana. Na izany aza, raha vao manomboka ianao ary mbola tsy nanao an'io dia mety ho sarotra aminao izany.
Ka avelanay eto ianao ireo dingana tsy maintsy raisinao hametrahana firaketana ao amin'ny Photoshop. Misy fomba maro, fa eto izahay manome anao ny tsotra indrindra amin'ny rehetra.
Sokafy ny Photoshop sy ny sarinao, ankoatry ny firafitra nofidinao ary tianao hananana io sary io.
Mandehana any amin'ny endrika ary tsindrio Image / Adjustments / Desaturate. Manala ny loko amin'ny volony io, satria tsy tena ilaintsika amin'ny ankamaroan'ny tranga.
Ampitao amin'ny anao ity sary ity. Amin'izany fomba izany dia hamorona sosona vaovao amin'ny fanontana ny tetikasanao.
Ovay ny fomba fampifangaroana ny sosona ho 'Overlay' ary ovao ny opacity, ny hamafiny, ny famirapiratany ... ho azonao ny valiny tadiavinao.
Aiza no ahazoana miloko Photoshop
Araka ny fantatray fa ho anao ny zava-dehibe indrindra dia ny fahalalana tranokala izay ahitanao firaketana Photoshop, Nanangona ny sasany amin'ireo tranonkala ahitanao ny firafitra izahay. Mazava ho azy fa afaka mahita azy ireo amin'ny banky misy sary ianao, na karama izany na maimaim-poana, fa amin'ny tranonkala sasany dia manana bebe kokoa izy ireo. Te hahafantatra aiza ianao?
Fantatra ity pejy ity satria izy no iray amin'ireo banky sary lehibe indrindra any. Ankehitriny, tsy dia manana saripika marobe izy io, fa kosa manana vina sy sary mitovy amin'izany.
Ary, mazava ho azy, manana endrika hafa mihitsy koa izy io. Maro amin'izy ireo no mamela anao misintona ny fisie PSD, manamora ny fiasana sy fanovana azy ireo.
Ity tranonkala ity, araka ny tondroin'ny anarany, dia miorina amin'ny fiavian'ny tranonkala, ny maodely 3d, ary ny firafitra. Ao anatin'izany no hahitanao katalaogy midadasika ary manana tombony izy ireo fa mety ho an'ny fampiasana manokana na amin'ny fampiasana ara-barotra.
Teknolojia tahiry maimaimpoana
Tranokala natokana ho an'ny firafitra fotsiny? Eny eny, iray amin'izy ireo ity. Ankehitriny, tsy ho hitanao ny fomba rehetra, fa miavaka amin'ny firafitra voajanahary na rindrina vaky.
Izy io koa dia manana faritra manokana ho an'ny grunge texture raha toa ka izy ireo no tadiavinao.
Eto, na dia afaka mahita firavaka maimaim-poana aza ianao, saika izy rehetra dia tsy maintsy aloa amin'ny fampiasana ara-barotra. Fa ny marina dia maro amin'izy ireo no mendrika azy amin'ny famaranana vitany sy ny kalitao nanaovana azy ireo.
Ary koa, eo no ahitanao a karazana lamba manokana, ireo izay sarotra ny mahazo na mamorona ny tenanao.
Drafitra / firafitra CGT
Amin'ity tranga ity, ity dia iray amin'ireo Tranonkala mihaja Photoshop izay ahitanao ohatra be dia be, voalamina arakaraka ny sokajy sy ny habeny. Io no tsara indrindra misy ary ny marina dia manana kalitao tena tsara izy rehetra. Mazava ho azy, raha te hisintona ny sasany mila manana kaonty maimaimpoana ianao, ary raha goavana ny sary dia mila kaonty premium (izay mitaky vola) ianao.
Fa amin'ny ankapobeny, ny habe antonony dia miasa tsara.
Teknolojia Malalaka an'i Mayang
Eto amin'ity tranonkala ity ianao dia afaka misafidy maherin'ny 4000 ireo rakitra an-tsary nampiantrano azy. Ny tranonkala dia manana endrika efa tranainy, saingy tsy midika izany fa tsy kalitao ny safidy omeny anao, ny mifanohitra amin'izay no izy.
Azonao atao ny mahita azy ireo mizara sokajy samihafa, izay hanampy anao hahita izay tadiavinao.
Texture Textures: Arroway Texture
Manokana amin'ny haingon-tsary Photoshop, ny tranonkala dia manana karazana haitao nomerika maro avy amin'ny sokajy samihafa. Ankehitriny, tsy afaka izy ireo. Manana kalitao sy famaranana tsara izy ireo, saingy mila mandoa vola ianao.
Avelany ianao ny Safidio ny misintona ny firafitra amin'ny vahaolana ambany, fa amin'ny fampiasan'ny tena manokana. Ity dia afaka manampy anao hanao sary ny tetikasanao, ary raha tian'ny mpanjifa izany dia vidio.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » dia midika hoe » Textures » Textures textures: aiza no hampidinana azy ireo